Iwulu Felt, Felt Christmas pendant, Fetelike felt - Huasheng
I-Hebei Huasheng Felt Co, Ltd. yasekwa njengeshishini elikhulu lobugcisa bezentengiso, amalaphu angalukwanga ngo-1970, kwaye ikwiNongong kunye neShijiazhuang, China. Siliqonga lethu lemveliso yelaphu e-China engalukanga, kwaye umyili oxhaswayo wenkxaso ye-China Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380). Kwaye ubandakanye inkampani yokuthenga kunye neyokungenisa elizweni: I-SJZ SINO-SAINT INTETHO YASEKHAYA KWAMZANTSI CO., LTD, iimveliso zithunyelwa kwilizwe liphela.
UVAVANYO NENKONZO EZIQINISEKILEYO
I-Hebei Huasheng Felt Co, Ltd. yasekwa njengeshishini elikhulu lobugcisa bezentengiso, amalaphu angalukwanga ngo-1970, kwaye ikwiNongong kunye neShijiazhuang, China.
Siliqonga lethu lemveliso yelaphu e-China engalukanga, kwaye umyili oxhaswayo wenkxaso ye-China Railway Harmony Locomotive EMU (CRH3-380).
Ezona Mveliso ziNinzi
Chwetheza T112 112 122 132 Density (g / cm3) 0.10-0.50 0.10-0.43 0.30-0.42 0.25-0.35 Thickness (mm) 0.5-70 2-40 2-40 2-50 Wool grade Austrian Merino Wool Chinese Wool Colour White White / ngwevu / mnyama okanye ibala lePantone Ububanzi be-1m Ubude be-1m-10m iTekhnoloji yokucinezelwa koQinisekiso ISO9001 kunye ne-SGS kunye ne-ROHS kunye ne-CE, njl. 1.Firm. Ibarbs zefayibha zidityaniswe kunye ngokuqinileyo kwaye aziyi kutyhilwa. Ukuchasa ukuxhathisa. Uboya obucinezelelweyo buziva bunesakhiwo esomeleleyo esiyi-abrasion ...
Iibhola ezomileyo zoboya zihlala zisenziwa ngo-100% wohlobo lwaseNew Zealand. Abayi kutyhila kwaye baya kuhlala iminyaka. Ubungakanani babo bulungile ngokugqibeleleyo ngokobuninzi bokwenza oko. Zilungile ngokufihla izinto zeentsiba ezinje ngeequilts kunye neejakethi. Sebenzisa iibhola zokuomisa uboya zigcina ulusu lwakho kwiikhemikhali ezisetyenziswa kumashiti owomileyo kwilaphu kunye nolwelo lwelaphu engamanzi, kwaye ikwagcina nesomisi sakho kwintsalela eseleyo kwezi. Luhlobo loqoqosho olunezinto ezinamachiza amdaka kunye netyhefu eyomileyo kunye nabaphethe iilaphu. Th ...
Ngale meko yeglasi yamehlo, unokuzibeka ngokukhuselekileyo iiglasi zakho kwaye uzigcine ucocekile. Le bag ye-eyeglass yokujonga usebenzisa i-Slip kuyilo oluvulekileyo, ungabeka ngokulula kwaye ukhuphe iiglasi zakho. Le bhegi yezibuko ezivayo ayipheleli ekuthwaleni iiglasi, kodwa namaqhosha, amakhadi, imilebe yomlomo nezinye izinto ezincinci. Usebenzisa umphezulu oziva ngathi, le bhokisi yeglasi yamehlo iyathamba kwaye ikhululekile ukuchukumisa, ipakethi encinci yefashoni. Le ngxowa yeglasi yamehlo ilungile kwizibuko ezinobukhulu obuqhelekileyo, iglules zokhuseleko, anti-glare compu ...
Iiphaneli ze-Acoustic zenziwe nge-100% PET, ngenaliti yokulungisa inaliti. Inkqubo yokuvelisa yinto esebenzayo ngokwasemzimbeni & ne-eco-friendly, akukho manzi amdaka, ukuphuma, inkunkuma, akukho nto inamathela.Iphaneli zephayiphu ye-polyester ifanelekile ukuxhamla uluhlu oluninzi lwezinto eziluncedo, bayithathela ingqalelo isandi esiphindaphindwayo, ukubonelela ngolawulo lwe-acoustic ukunciphisa ubungakanani bengxolo igumbi. Iipaneli zethu ze-PET acoustic panels ezingahambisi ityhefu, ezingezizo i-allergenic, ezingabacaphukisi kwaye azinazo izibophelelo eziqinisekisiweyo ze-formaldehyde kwaye zine-NRC ephezulu: 0.85.100% polyester ...
Item Felt coasters & placemats Material 100% merino wool Thickness 3-5mm ubungakanani 4 × 4 '', okanye i-color Pantone color Shapes Round, hexagon, isikwere, njl njl. Inketho yokuprinta I-Silkscreen yokuprinta yoshicilelo yedijithali yokuprinta yokushicilela. Iinketho zoluhlu lweLaser Scanning, isilkscreen, iilebheli ezilukiweyo, uthuthu lwesikhumba, njl njl. Uqoqosho lwethu nge-100% luvava lukwindawo yendalo, evuselekayo enokuthetha ukuba akukho zinto zinetyhefu. I ...